Sida loo soo dejiyo burushyada Procreate: Website-yada lagu soo dejiyo burushka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waxaa muhiim ah in aad ogaato in haddii aad ka shaqeyso adduunka sawir-qaadista ama naqshadeynta garaafyada, waxaad xiisayn doontaa inaad ogaato inay jiraan siyaabo badan oo lagu soo dejiyo burushyada hal-abuurka iyo asalka ah ee ka dhigi kara mashaariicdaada farshaxanimo badan.
Waa sababtaas tan qoraalkan. Waxaan dooneynaa inaan sharaxno sida loo soo dejiyo iyaga iyo wax kasta oo ka sarreeya meesha lagu sameeyo. Waxaa jira bogag shabakadeed badan oo aad ka soo dejisan karto, goobo qaali ah oo leh kharash dheeri ah ama goobo gebi ahaanba bilaash ah oo aad ku raaxaysan karto faa'iidooyinka ay bixiso.
Haddii aad tahay qof jecel wax kasta oo aan kor ku soo sheegnay, u diyaar garow fannaanka cusub ee soo socda.
1 Waa maxay Procreate?
2 Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo burushyada Procreate
2.1 Tallaabada 1
2.2 Tallaabada 2
3 Halka laga soo dejiyo burushyada
3.3 Naqshadaynta Goynta
4 noocyada burushka
4.1 burushka oo dhan
4.2 burush dhibco leh
4.3 burushyada calligraphic
4.4 burush texture
4.5 burush majaajillo ah
Waa maxay Procreate?
Bixinta waa qalab ka mid ah una shaqeeya sida software sawireed. Si ka duwan Illustrator. Procreate waxay leedahay qalabyo kala duwan oo muhiim ah oo ka yimaada koorsooyinka khadka tooska ah ilaa buraashyo aan dhamaad lahayn oo u oggolaanaya isticmaalka weyn iyo isticmaalka sawirka.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale diyaar u tahay labada iPad. Inkasta oo ay tahay codsi lacag-bixineed, waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto faleebo suurtagal ah iyo walxaha garaafyada. Qiimaha bishii waa kala duwan yahay €9 ilaa €0, sida aad arki karto waa qiimo aan aad u ballaaran ama qaali ahayn.
Mid ka mid ah astaamaha shaki la'aan ka dhigaya Procreate mid ka mid ah qalabka xiddigaha ee sawir-qaadayaasha ayaa ah liiskeeda weyn ee burushyada ay bixiso. Ma aha oo kaliya in lagu garto burushkeeda laakiin sidoo kale qalabkeeda kala duwan ee naga caawiya in aan wax ka beddelno dhammaan dhaqdhaqaaqyada aan abuurno marka aan isticmaalno codsiga sida aan doonayno.
Sida Photoshop, Procreate sidoo kale waxay la shaqeysaa lakabyo, taas oo u oggolaanaysa dhaqdhaqaaqa shaqada inuu la mid yahay mana jiraan farqi weyn haddii aad caadi ahaan u isticmaasho Photoshop shaqadaada.
Waa mid ka mid ah aaladaha ugu fudud ee lagu hagi karo, sidaa awgeed heerka xirfadeedu maaha mid aad u sarreeya, waxaana suurtogal ah in sawirrada lagu sameeyo qalin iyo jiirka labadaba.
Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo burushyada Procreate
Xigasho: Andro Hall
Marka xigta waxaan sharxi doonaa sida loo soo dejiyo oo loo rakibo burushyada. Waxa kaliya ee aad u baahan doonto waa inaad haysatid agabka soo socda: Qalimaan cajiib ah oo loogu talagalay Procreate (buraashka). Markaad ka dhex raadisay biraawsarkaaga internetka oo aad soo dejiso oo aad rakibto, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad bilowdo.
Si aad u soo dejiso burushka waxaad u baahan doontaa:
Waxa ugu horeeya ee aan sameyneyno ayaa furan shiraac cusub oo sidan ku taabo astaanta burushka si aad u furto guddida burushka. Waxaan dooran doonaa galka meesha aad rabto inaad ku rakibto burushka. Waxaad samayn kartaa gal cusub adiga oo taabsiinaya + badhanka dhanka bidix ee sare ee liiska burushka. Guji + badhanka ka sarreeya liiska burushka si aad u soo dejiso burush cusub.
Marka aan samayno galka waxaan taaban doonaa badhanka soo dejinta geeska midig ee kore.
Daaqadda galka qalabkaaga ayaa markaa furmi doonta. Faylasha waxaa laga soo dejin karaa galka Drive, iCloud Drive, ama Dropbox kaaga. Kaliya taabo burushka aad rabto inaad soo dejiso waxaana si toos ah loogu dari doonaa galka aad ka dooratay burushyada Procreate.
Si aad u furto burushka kuwaas oo ku jira faylalka ZIP-ka waxaad kala soo bixi kartaa codsiga bilaashka ah ee loo yaqaan FileExplorer ama File Manager. Marka codsiga la rakibo, daaqad ayaa furmi doonta si aad u furto oo aad u soo dejiso daaqada faylka ee iPadkaaga.
Haddii aad leedahay kombuyuutar MAC, waxaad furi kartaa faylka burushka oo aad u jiidi kartaa daaqada AirDrop. iPad kaaga waa inuu u muuqdaa mid shaqaynaya si loo helo burushka. Ku soo jiidida magaca iPadkaaga waxay soo dejin doontaa burushyada Procreate.
Halka laga soo dejiyo burushyada
Envato Waa nooc ka mid ah suuqa internetka oo lagu garto inay ka kooban yihiin tiro badan oo maqaallo ah sida: maaweelo, xayaysiis online iyo offline iyo warbaahinta, iwm. Hadda waa mid ka mid ah codsiyada loogu isticmaalka badan yahay maadaama ay leedahay in ka badan 4 milyan oo la soo dejiyo maalin kasta.
Gumroad waa mid kale oo ka mid ah suuqyada internetka ee loogu talagalay kuwa abuuraya nuxurka dhijitaalka ah. Qalabkan caanka ah Waxa ay noqotay wax fayras ah iyada oo ay ugu wacan tahay mid fudud oo si fudud loo dhex socon karo iyo noocyada kala duwan ee badeecooyinka ay siiso isticmaaleyaasheeda.
Naqshad gooyntu waxay caan ku tahay adduunka oo dhan inay tahay codsi ay alaabtiisa gacanta ku sameeyeen farshaxanno iyo naqshadeeyayaal kala duwan. Waa mid ka mid ah aaladaha kuu oggolaanaya inaad ballaariso goobta farshaxanka ee sawir-qaadista iyo animation. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka heli kartaa burush diyaar u ah Photoshop.
burushka oo dhan
Buraashka oo dhan waxay magacooda ka helaan noocyada kala duwan ee ficillada ay awoodaan. Waxaa ka mid ah sawir-gacmeed.
burush dhibco leh
Buraashyada stipple-ka badanaa waa burush caaraddoodu ay tahay mid sifada leh oo ku habboon si loo hubiyo in sawirku aad u fudud yahay oo aad u sahlan yahay in la qabto.
burushyada calligraphic waxa la nashqadeeyay iyada oo ujeedadu ahayd in loo isticmaalo mashruucyo qoraalkoodu uu noqdo jilayaasha. Xaaladdan oo kale, waxaa si gaar ah loogu talagalay nuqul-qorayaasha ama qorayaasha.
burushyada qoraalka ah waxaa lagu go'aamiyaa alaabta sida midabada biyaha, qalin qori, warqad ciid ama xitaa qaar badan oo iyaga ka mid ah waxaa lagu go'aamiyaa sanqadh iyaga lagu garto.
Waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee qalin kuwaas oo leh ilaa 12 burush oo kala duwan oo aad waxtar u leh. Haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay inaad abuurto xarfo fantastik ah oo hal abuur leh, ha ka waaban inaad isticmaasho nooca qalin.
burush majaajillo ah
Buraashyada majaajilada ah ayaa badanaa ah burushka asalka ah ee ugu asalka ah maadaama ay u janjeeraan inay sawiraan oo ay abuuraan sawiro majaajillo ah oo la mid ah taabasho yar oo laga soo bilaabo waagii.
Caadi ahaan, waxay ka kooban yihiin 12 burush oo inta badan ku habboon iPad-ka oo ay weheliyaan textures kala duwan kuwaas oo ilaalinaya sifooyinka hore loo soo bandhigay.
Haddii aad jeceshay qaybtan cusub ee Procreate iyo burushkeeda, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad akhrido qaar kale oo badan oo aanu adiga kuu qorshaynay.
Sida aad aragtay, waxaa jira burushyo badan oo laga heli karo internetka. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad rakibto qaar ka mid ah baakadaha aan horay u soo sheegnay oo aad bilowdo inaad ku sawirto.
Hadda waa wakhtigaaga inaad noqoto jilaaga sawiradaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo soo dejiyo burushyada Procreate
Taariikhda astaanta Disney